Wararka - Sida Loo Isticmaalo Kiimikooyinka Daaweynta Biyaha 2
Sida loo Isticmaalo Kiimikooyinka Daaweynta Biyaha 2
Sida Loo Isticmaalo Kiimikooyinka Daaweynta Biyaha 3
3. Stirring waa inuu ka badnaadaa 60 daqiiqo oo leh 200-400 oo duub / min.Waxa fiican in la xakameeyo heerkulka biyaha sida 20-30 ℃, taasi waxay dedejineysaa kala-baxa. Laakiin fadlan hubi in heerkulku ka hooseeyo 60 ℃.
Sida loo isticmaalo chloride-ka polyaluminium: (oo lagu dabaqi karo warshadaha, daabacaadda iyo dheeh, biyaha wasakhda ah ee dawladda hoose, iwm.)
1. Kala fur badeecada adag ee polyaluminium biyo leh cabir ahaan 1:10, walaaq oo isticmaal.
2. Marka loo eego jahwareerka kala duwan ee biyaha ceeriin, qiyaasta ugufiican ayaa la go'aamin karaa. Guud ahaan, marka jahwareerka biyaha ceyriin yahay 100-500mg / L, qiyaasta waa 10-20kg halkii kun tan.
3. Marka jahwareerka biyaha ceyriinku sarreeyo, qiyaasta si habboon ayaa loo kordhin karaa; marka jahwareerku hooseeyo, qiyaasta ayaa si habboon loo dhimi karaa.
4. Polyaluminium chloride iyo polyacrylamide (anionic, cationic, non-ionic) ayaa loo wada isticmaalaa natiijooyin wanaagsan.